"Umyalezo wakho awuthunyelwanga" Imposiso kwiMiyalezo ye-Mac | Ndisuka mac
Isisombululo kwimpazamo "umyalezo wakho awukwazanga ukuthunyelwa" kwiMiyalezo ye-Mac
UJavier Porcar | | Tutorials
Ngamanye amaxesha, ukuba singabasebenzisi abaqhelekileyo be Imiyalezo singadibana iwindow pop-up ngombhalo "Umyalezo wakho awunakuthunyelwa". Ngolu lwazi umsebenzisi unikwa ukuqonda ukuba kukho impazamo eyenzekileyo kutsha nje kwisicelo. Ihlala ibonakala xa siphinde sayisebenzisa kwakhona iMac emva kwemizuzu embalwa okanye iiyure zokuma, okanye emva kokuqalisa kwakhona. Impazamo ivela xa iiseva zingawungqumelananga ngokuchanekileyo umyalezo. Oko kukuthi, kuhlobo lwe "limbo" apho kunokwenzeka ukuba iseva ixelele ukuba uthumele umyalezo, kodwa iMac yethu ayinampendulo inye kwaye ingxaki iyenzeka.
Kwangelo xesha, emazantsi umyalezo usibuza, ungathanda ukuthumela kwakhona? Sifumana iindlela ezintathu: ungawunaki, uvule okanye uthumele umyalezo. Njengoko siza kubona ngokulandelayo, ukuba ukhetha "Ungayihoyi" impazamo inokubuyela kwangoko. Inketho "Vula umyalezo" Ngokwesiqhelo ikubuyisela kwakule mpazamo inye, njengoko inokwenzeka ngoba ingxaki ayikasonjululwa. Okokugqibela kukhetho Thumela umyalezo kwakhona Nokuba sicinezela ngokulandelelana akukho nto yenzekayo. Isonjululwa njani emva koko?
Into yokuqala ekufuneka siyijongile yile Izicwangciso ze-iCloud y Imiyalezo. Ukwenza oku, singena kukhetho lomyalezo kwaye siqiniseke ukuba iMac ikulungele ukuthumela imiyalezo kwaye iqhagamshelwe kwi-iCloud.
Kodwa enye impazamo enokubakho, enokubangelwa yi Vumelanisa ingxaki ngemiyalezo. Isisombululo kule meko si ngokucofa kaninzi kwigama lokungahoyi kude kube sisicelo se-Apple sokulungisa ingxaki yokuvumelanisa, ebonakalayo ivela phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo apho sine-ID efanayo ye-Apple kwaye sisebenza kunye nokusetyenziswa kwemiyalezo.
Ndiyathemba ukuba abafana baseApple, kancinci kancinci kwezi ngxaki. Kwangelo xesha, siyathemba ukuba amanqaku eMiyalezo esiyonwabelayo kwi-iOS angabandakanywa kuhlobo lweMac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Isisombululo kwimpazamo "umyalezo wakho awukwazanga ukuthunyelwa" kwiMiyalezo ye-Mac
Ndibona uphawu lombuzo kunye nefolda ekuqaleni, ndilandela amanyathelo abonisiweyo kodwa ayibonakali ukukhetha idiski, ndibonakala ndikhetha inethiwekhi ye-Intanethi ye-Wi-Fi, ndiyayikhetha kwaye ndiyinika ukuba ndiyilandele kwaye ndifumana Ukujika kwebhola yehlabathi, kwaye ngokukhawuleza iyayeka kwaye ndikhwele kwibhola yehlabathi engama-6002F
I-Apple isungule ii-MacBook Pros ezintsha ngaphandle kweTouch Bar
Amalungelo awodwa abenzi be-Apple ityala elitsha le-AirPod onokulithanda